Izizathu ze-6 zokusetha kabusha i-WordPress Blog yakho | Martech Zone
Izizathu ze-6 zokusetha kabusha i-WordPress Blog yakho
ULwesihlanu, July 19, 2019 ULwesihlanu, July 19, 2019 Bryan
WP Setha kabusha iyi-plugin ekuvumela ukuthi usethe kabusha isiza sakho ngokuphelele ngokuphelele futhi ngokwengxenye lapho kuphela izingxenye ezithile zebhulogi yakho ezifakiwe kuzinguquko. Ukusetha kabusha ngokuphelele kuyazichaza, kususa konke okuthunyelwe, amakhasi, izinhlobo zeposi yangokwezifiso, ukuphawula, okufakiwe kwemidiya, nabasebenzisi.
Isenzo sishiya amafayela emidiya (kepha asiwabhalisi ngaphansi kwemidiya), kanye nokuhlanganiswa okufana nama-plugins nokulayishwa kwetimu, kanye nazo zonke izici eziyinhloko zesayithi - isihloko sesayithi, ikheli le-WordPress, ikheli lesayithi, ulimi lwesayithi , nezilungiselelo zokubonakala.
Uma ukhetha ukusetha kabusha ngokwengxenye, nakhu ukukhetha kwakho:
Okudlulayo - yonke idatha yesikhashana iyasuswa (kufaka phakathi okuphelelwe yisikhathi, okungaphelelwa yisikhathi nokufakiwe kokuphelelwa yisikhathi kwezintandane)
Layisha idatha - wonke amafayela alayishiwe ku-C: \_ ifolda \_ htdocs \_ wp \_ wp-okuqukethwe \_ okulayishiwe kuyasuswa
Izinketho zetimu - susa izinketho nama-mods azo zonke izingqikithi, ezisebenzayo nezingasebenzi
Ukususwa kwetimu - isusa zonke izingqikithi, ishiya kuphela itimu ezenzakalelayo ye-WordPress etholakalayo
Ama-Plugin - wonke ama-plugins ngaphandle kwe-WP reset ayasuswa
Amathebula wangokwezifiso - wonke amatafula wangokwezifiso anesiqalo se-wp_ ayasuswa, kepha wonke amatafula ayisisekelo nalabo abangenawo isiqalo se-wp_ bahlala
ifayela le-.htaccess - isusa ifayela le-.htaccess eliku-C: /folder/htdocs/wp/.htaccess
Kubaluleke kakhulu ukukhomba ukuthi zonke izenzo zingezokugcina futhi zingahlehliseki, noma ngabe uhamba ngakuphi, ngakho-ke qiniseka ngaphambi kokuchofoza leyo nkinobho.
Uma kwenzeka uzibuza ukuthi yisiphi isimo esingadinga ukusethwa kabusha kwebhulogi / isayithi, ungakhathazeki. Senze uhlu lwezizathu eziyisithupha ezivame kakhulu ezingaletha lesi senzo. Ngaphandle kokunye ukwengeza, hlola ukuthi ngabe ibhulogi yakho isengozini yokuthi isethwe kabusha:
Esinye sezizathu sokuqala esiza engqondweni lapho ucabanga ukusetha kabusha ibhulogi kulapho ushintsha usuka endaweni yangasese / ngasese uye esidlangalaleni. Lapho uqala emkhakheni wokuthuthuka kwewebhu, noma ngisho ne-blog ephethe ukubheja kwakho okuhle ukuqala ngokuthile lapho kungabikho monakalo ongaba khona. Noma ngabe kuyisiza sasendaweni noma okuyimfihlo akubalulekile, okubalulekile ukuzama konke ongakwenza futhi ubone ukuthi konke kusebenza kanjani ndawonye - ama-plugins, imibhalo, izingqikithi, njll. sekuyisikhathi sokwenza switch ku-deal yangempela kaningi kunalokho ongafuni ukukwenza kusuka kushidi elihlanzekile.
Kusukela ukuqala futhi wenza ukuhlolwa okubanzi, ekufundeni kokuncenga njengoba uqhubeka, kuzodingeka kube nenqwaba yezingcezu ezingqubuzanayo ebhodini. Kungenzeka ukuthi, lezi zinkinga zizogxila kakhulu esisekelweni kangangokuthi indlela elula yokuqala kabusha ukuyibuyisela ekuncengeni. Ngolwazi lwakho olusha, uzobe ukwazi ukuqala uhlanzekile ngokugwema wonke amaphutha afike ngaphambili.
Ukulandela ibhulogi yokufunda / yokuhlola, kunezimo lapho izinkinga eziningi ezifanayo zingavela ngamabhulogi asevele abukhoma. Lokhu kungaba yiqiniso ikakhulukazi ezimeni lapho isiza besikade sikhona isikhathi eside futhi, ngaleso sikhathi, sinikeze inani elikhulu lokuqukethwe okuhlukahlukene. Umthetho wesithupha ukuthi lapho uhlinzeka ngokuqukethwe okuningi, isoftware engaphansi uzodinga ukukuxhasa konke.
Uba nesitolo sewebhu, udinga i-plugin ukuyiqhuba, udinga ukubhaliswa ukubuka okunye noma konke okuqukethwe kwakho, udinga i-plugin, unezigaba ezahlukahlukene ezinokuqukethwe okuhluke ngokuphelele kumakhasi ahlukene, udinga izingqikithi eziningi zenkambiso ukuze uhlukanise phakathi kwazo. Uhlu luqhubeka nje luqhubeke.
Cishe uzobe ungeza ukuhlanganiswa njengoba ubadinga, ungakhathazeki kangako ngalokhu okusele futhi okungangqubuzana nokusha okwenzayo. Ukubeka izixazululo ezahlukahlukene, kungaba ama-plugins ahlanganisiwe, noma izinsizakalo zangaphandle ngaphezulu komunye nomunye, ngokuhamba kwesikhathi kungenzeka futhi mhlawumbe kuzoba nezinxushunxushu.
Okokuqala kwakho ku-backend futhi ekugcineni kwabavakashi bakho ngaphambili. Uma, empeleni, ifika kulokho, sekuvele sekwephuze kakhulu nganoma yini ngaphandle kokusetha kabusha ngokuphelele. Futhi, izixazululo ngazinye zingasetshenziswa, kepha kubaluleke kakhulu lapha ukwenza lo msebenzi ngokushesha ngoba isiza livulekele umphakathi. Njengoba amasayithi amaningi namabhulogi kulezi zinsuku, okungenani, kunezindlela ezithile eziyisisekelo zokulondoloza, ngemuva kokusetha kabusha cishe uzokwazi ukushaya phansi ngokushesha.
Ukushintsha kokuqondiswa kokuqukethwe
Okunamandla shintsha kokuqukethwe noma ifomethi kungaba futhi yisizathu sokuthi ufune ukusetha kabusha ibhulogi yakho. Njengoba uguquka, injalo nebhulogi yakho nokuqukethwe okukhiphayo. Inqobo nje uma kunomucu ovamile kukho konke ungaqhubeka uye phambili, kepha uma kwenzeka ithuba elibukhali okungenzeka ukuthi kungenzeka.
Mhlawumbe ufuna ukuzamazamisa izinto, mhlawumbe okuqukethwe okukhiphayo kungezikhathi okubhalwe ngazo (kulandela umkhankaso womkhiqizo omusha ngokwesibonelo) futhi akusebenzi manje. Akunandaba ukuthi siyini isizathu soshintsho lapho kungafika iphuzu lapho ukunamathela kokuqukethwe ongakudingi kuyize futhi ukuqala okusha kuyadingeka.
Njengoba ukusetha kabusha isiza sakho kususa ngokuphelele yonke ingobo yakho yomlando ezishicilele (konke okuthunyelwe namakhasi) kanye nokuba okokugcina nokungaguquguquki udinga ukucabanga kanzima ngaphambi kokuya ngale ndlela. Izizathu ezimbili ezedlule esizibalile zisekelwe kubuchwepheshe kunanoma yini enye (isoftware inemba kakhulu). Lokhu, noma kunjalo, kuyindaba yokuzikhethela kunesidingo futhi ngakho-ke kudinga uhlelo olucace bha lwesikhashana nesikhathi eside sebhulogi, ngakho-ke futhi - cabanga kanzima bese ucabanga kabili ngaphambi kokwenza.
Ukucisha ibhulogi yakho
Ngokuhambisana nesizathu esisekelwe kokuqukethwe ngaphambili, lokhu kulandela isitimela esifanayo somcabango. Ukuvala ibhulogi yakho nganoma yisiphi isizathu kufanele kuhambisane nezenzo ezithile ukuvikela kunoma yikuphi ukusetshenziswa kabi. Cabanga nje ukuthi unokuthile okwadonsa iminyaka ngemuva kokuthi ibhulogi yakho ifile futhi wasetshenziswa ngendlela owawungahlosile nje kuphela kepha empeleni kuyingozi. Ukugwema izimo ezinjengalezi kuwumqondo omuhle ukusula islayiti ngaphambi kokuya kokungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Manje, sonke siyazi ukuthi noma yini evela kuwebhu ihlala lapho kuze kube phakade ngandlela thile, kepha akufanele usebenzise okuqukethwe kwakho ngoqwembe lwesiliva. Ukusetha kabusha ibhulogi yakho kusho ukuthi ingobo yomlando ephelele yokuqukethwe kwakho koqobo okulayishwe ngokuthunyelwe namakhasi kuyasuswa. Lokho kusho ukuthi ngaphandle kokuthi othile endaweni akugcine okuqukethwe ngenkathi kushicilelwa ekuqaleni kuzoba nzima ukukuthola.
Njengoba sishilo ukususa ngokuphelele okuthile kwi-inthanethi akunakwenzeka, kepha ngezenzo ezimbalwa nje, ukusetha kabusha ukuba ngowokuqala phakathi kwabo bobabili niyazivikela wena nempahla yakho yengqondo. Ngaphezu kwalokhu, ngeke kudingeke ukuthi uyisuse ngokuphelele ibhulogi yakho, esikhundleni sokuyibeka endaweni yesikhashana noma unomphela ongabuyela kuyo ngokuzayo. Ngeke ukwazi ukuqhubeka nje ukusuka lapho ugcine khona, kepha kuzoba nesisekelo esiqinile ongasebenza naso.
Kuze kube manje zonke izizathu bekungelula, izinqumo zebhizinisi, noma ukuthula kwengqondo. Ngeshwa, kunezizathu ezingathandeki kangako zokufuna ukusetha kabusha isiza. Bona ukuthi sisebenzise igama elithi "ukufuna" hhayi "ukufuna". Uma kube khona ukwephulwa kwezokuphepha kanye nesayithi lakho nokuqukethwe elikulo kusengcupheni usuke "udinga" ukuthatha izinyathelo ezifanele. Ukushintsha, ukuvuselela nokuthuthukisa i- izilungiselelo zokuphepha kuyinto yokuqala okufanele ubhekane nayo, kepha akuyona ukuphela kwento.
Sesivele sishilo ukuthi isikhathi esiningi kunezinhlobo zokulondoloza ngisho nabahlinzeki besizinda abayisisekelo, ngakho ukusetha kabusha ngokuphelele akuyona into okufanele uyesabe. Ngokwenza lokho uvikela wena ne-blog yakho nokuqukethwe kusuka kusongo esivele senzekile nanoma yiziphi izinsongo ezizayo ezingase zenzeke.
Kubukeka sengathi sisuka kokubi siye kokubi kakhulu, kepha lezi yizo zonke izizathu ongahlangabezana nazo ezingakushukumisela ukuthi uphumule isiza sakho. Njengokwephulwa kwezokuphepha, lapho ubhekene nanoma yisiphi isenzo somthetho (esinqunyelwe ukuthi senzeke, hhayi kuphela enkambisweni) akukho okuningi ongakwenza kepha ukuthobela ngemuva kokuthi zonke ezinye izinsiza seziphelile.
Akunandaba ukuthi unikeze muphi umyalo, ikakhulukazi kumayelana nokuvala ibhulogi / isayithi lakho, kuwukuhlakanipha ukwenza ukusetha kabusha okugcwele ngaphambi kokuba uthobele. Sivele simboze ukuthi kungani lokhu kubalulekile nokuthi kungasetshenziswa kanjani ngendlela ongayifuni uma ungathathi zonke izindlela zokuvikela ngalezi zinhlobo zezinto ezintekenteke.
Umugqa wesenzo ofanele kulezi zimo kuzoba ukusetha kabusha-okungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ukugcina lokhu okungenani ungasindisa okuthile esimweni esivele simbi futhi ungakwenzi kube kubi kakhulu kunalokho okuvele kuyikho.
Futhi lapho unayo. Izizathu eziyisithupha eziphezulu zokuthi kungani ungafuna ukusetha kabusha isiza sakho, ngokugcwele, noma ngokwengxenye. Uma uzithole ukulesi simo esishiwo ngenhla mhlawumbe yisikhathi sokucabanga isenzo esinjengalesi, noma singabonakala sikhulu. Kwesinye isikhathi izinyathelo ezinjengalezi yizo kuphela ezisele.
Tags: setha kabusha i-wordpressWordPressplugin wordpress
UBryan Mixon ungumnikazi we AmazeLaw, isakhiwo sewebhusayithi sabameli bodwa abaqinile. UByran ubelokhu akha amawebhusayithi kusukela ngo-1999 futhi usechithe iminyaka emine edlule esiza izinkampani ezifana neHubSpot, iMill33 neLivingSocial. UBryan uyazi mathupha ukuthi kungaba nzima kanjani kosomabhizinisi abancane ukuthola ukumaketha kwedijithali phansi, ngakho-ke wakha i-AmazeLaw njengendawo elula kakhulu yabameli bodwa ukwakha amasayithi abo, ukuqoqa imikhondo nokuqhubeka nezinsuku zabo ukwenza izinto zobumeli.
Yiziphi Izindlela Eziphezulu Zokukhula Kwezingxenyekazi ze-SaaS